९५ जनामा दुई महिला, यस्तो पनि हुन्छ ? (Two Women in Ninty-five Men, does it happen? | Bimala Rai Paudyal
९५ जनामा दुई महिला, यस्तो पनि हुन्छ ?
निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । यो पनि समावेशी हुनुपर्ने भनेका हौँ । त्यतिखेर योजना आयोगमा ६० वर्षको इतिहासमा म चौथो महिला थिएँ । त्यहाँ पनि आवाज उठाउन गाह्रो थियो । तैपनि हामीले बाहिरबाट लिने विज्ञहरूमा महिला हुनैपर्ने र सामाजिक विकास पढेको हुनुपर्ने भनेका थियौँ । महिला राखेपछि महिलासम्बन्धी विज्ञ भन्ने गरिन्छ, तर यो सत्य होइन । त्यसैले यस्तै विषय पढेको विज्ञसहित महिलाको समानुपातिक सहभागिता निर्देशक समितिमा हुनुपर्छ भनेका हौँ । हामीले त सबै संरचनामा महिला हुनुपर्छ भनेका हौँ, तर सबै पदेन राखिदिएर समस्या भयो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री हुनुपर्ने भनिएको छ, जुन–जुन मन्त्रीलाई पदेन सदस्य गरौँ ९५ जनामा दुईजना महिलाको आवाज सम्बोधन होला ? सम्भवै छैन । यस्तो पनि गर्नहुन्छ ? उहाँहरूले दिएको सुझाव समेटिन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
यसमा प्राधिकरणको दोष छैन । यो सबै दोष राजनीतिज्ञहरूको हो । प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलले एकदमै सकीङ्र्णता देखाए । उनीहरूले महिला पनि यो ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने सोचेनन् । संविधानको मर्म पनि लत्याए। तैपनि प्राधिकरणलाई योजना बनाउँदा महिला, बालबालिका र सामाजिक क्षेत्र हेर्ने विज्ञसँग परामर्श गर्न कसैले रोक्दैन । कार्यकारी समितिले यो गर्न सक्छ । निर्देशक समितिले निर्णय गर्दा पनि यस्तो परामर्श गर्न सक्छ । जुन काम हामीले पीडीएनए बनाउँदा गरेका थियौँ । साथै कार्यकारी समितिले पनि काम गर्ने क्रममा महिलाको सवालमा काम गर्ने सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । यसरी सच्याउने ठाउँहरू छन् अझै पनि । तर, यसैगरी चल्ने हो भने भूकम्पपछिको राहत वितरण जस्तो भएको थियो अब पुनर्निर्माण पनि यस्तै हुन बेर छैन ।
प्रकाशित मिति: २०७२ माघ ११ गते सोमवार